Global Voices teny Malagasy » Siriana Mpitsoa-ponenana Maniry Fanangonam-bola Ho An’ny Toeram-pisakafoanany Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Septambra 2015 5:21 GMT 1	 · Mpanoratra MigraMundo Nandika (en) i Taisa Sganzerla, Tantely
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Latina, Brezila, Syria, Fampandrosoana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Sakafo, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Tsara
Talal Al-Tinawi, injeniera amin'ny mekanika lasa mpahandro. Sary: Rakitra manokana, fampiasàna nahazoana alàlana
Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogy Migramundo  ity lahatsoratra ity, ary naverin'ny Global Voices nalefa araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Injeniera amin'ny mekanika ilay Syriana mpitsoa-ponenana, Talal Al-Tinawi, fa hatry ny nahatongavany tany Brezila ny faramparan'ny taona 2013, nahita antso hafa izy. Taorian'ny fahaketrahana tanteraka tamin'ny resaka an-databatra isan'ambaratongany momba ny fankatoavana ny diplaomany tany Brezila, nahita fomba hafa afaka nanoloana an'io izy mba hahafahany mahazo vola, amin'ny fahandroana, nentanin'ny fankafizan'ireo mponina ny sakafo Syriana-Libane (izay antsoin'izy ireo hoe “sakafo arabo”). Ankehitriny, afaka mitondra azy amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ilay antso vaovao-ny, raha mety tsara ilay hetsika fangatahana famatsiam-bola  ataony.
Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2014 ny tantara, raha nampiantrano vondrona mpinamana sy mpirotsaka antsitrapo avy amin'ny Adus  tao an-tranony i Talal. Adus dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay manampy ireo mpitsoa-ponenana any São Paulo, toerana ipetrahan'i Talal sy ny fianakaviany. Nahazo dera sy fahombiazana lehibe tamin'ireo vahiny ny sakafony sy ny tohanaina nataony, ary nanome soson-kevitra azy izy ireo hoe maninona moa raha ampiasainy io talentany io mba hanokafany ny fandraharahàny manokana.
Izany no nahaterahan'ny Lakozia Syriana an'i Talal , tolotra sakafo aterina any amin'izay toerana lazainao, izay ataony ao an-tranony, mamatsy sakafo ho an'ireo fety sy hetsika ao São Paulo, tafiditra amin'izany ilay hetsika nentim-paharazana any São Paulo “Fetin'ny Mpifindra monina,” izay nankalaza ny faha-20 taonany tamin'ity taona ity ary nandroso sakafo ho an'ny olona niisa 400 tao Pari Mosque (maoske lehibe ao an-tanàna) nandritra ny Ramadany. Nampianatra mahandro an'ireo mpitsoa-ponenana namany ao Adus ihany koa i Talal. “Hatramin'ilay fety, tsy nitsahatra ny nahandro mihitsy aho,” hoy izy tamin'i Migramundo.
Nanomboka ny faran'ny taonjato faha-19 ny fifindràna monin'ireo Syriana sy Libane nankany Brezila, ary ny taona 1930, nandray olona maherin'ny 100.000, izay Kristianina ny ankamaroany, ity firenena ao Amerika Atsimo ity. Ankehitriny, farafahakeliny 6 tapitrisa amin'ireo Breziliana no manana fiaviana avy any atsinanan'i Mediterane.
Efa sakafo malaza indrindra hoy i Talal ny “sfihahs” (mofo misokatra voasesika hena) ary “kibbehs” (totokena mendy), izay fantatr'ireo Breziliana sahala amin'ireo tohanaina hafa ao an-toerana. “Fa taorian'ny namoronako ny karazan-tsakafo, nanomboka nampiseho fitiavana tsikelikely tamin'ireo sakafo hafa ihany koa ny olona.”
Mahatonga an'i Talal hieritreritra ny hanitatra ny fandraharahany ary hanokatra toeram-pisakafoana ny fitomboan'ny tinady amin'ny sakafony. “Mety ho fantatra bebe kokoa hatrany ireo vokatra ataoko, raha mipetraka amin'ny toerana tsy miovaova, ary hanana fototra sy toerana tsaratsara kokoa aho mba hanitarana karazana sakafo sarotsarotra kokoa sy miovaova,” hoy izy.
Kibbehs, sfihas, sy ireo tohanaina Syriana hafa ataon'i Talal. Sary: rakitra manokana, fampiasàna nahazoana alàlana
Miaraka amin'ny fanampian'ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Adus, nanao hetsika fangatahana fanangonam-bola  tamin'ny aterineto i Talal hanangonana 60.000 Reais Breziliana (eo amin'ny 15.000 Dolara Amerikana). Mikasa ny hividy ireo fitaovana fototra ho an'ny orinasany izy amin'ilay vola: lafaoro, vata fampangatsiahana, fitaovana fanapotehana sy fanafangaroana sakafo, fitaovana fanovàna sakafo, ary ireo zavatra hafa ilaina mba hampandeha ny toeram-pisakafoanana.
Hatreto aloha, mbola vao vola kely no voahangon'ilay hetsika, latsaky ny 15.000 BRL (eo amin'ny 3.500 Dolara Amerikana) ary manana hatramin'ny 21 Septambra mba hanenjehana ny tanjony. Sahala amin'ireo hetsika hafa fanangonam-bola, hahazo fanomezana toy ny sakafo ao amin'ilay toeram-pisakafoana ho foronina, na karatra fahazoana fihenam-bidy azo ampiasaina mandritra ny taona iray ireo malala-tànana. ‘Malefaka tsara’ ilay hetsika fanentanana, izay midika hoe raha tsy tratra ny tanjona, tsy haverina any amin'ireo malala-tànana ny vola, fa hampiasaina amin'ny ampahan'ny vola miala amin'i Talal, ary mbola azon'ireo malala-tànana atao ny mampiasa ireo fanomezany ho lasa tolotra sakafo aterina any an-trano, izay efa fanaon'i Talal rahateo.
Te-hanitatra ny fandraharahàny amin'ny fanokafana toeram-pisakafoana i Talal. Sary: Rodrigo Borges Delfim, Migramundo
Nanampy an'i Talal ihany koa ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny Adus tamin'ny fanaovana ny taratasy any amin'ny birao Breziliana mba hanaovana ny asany ho ara-dalàna — olana iray izay atrehan'ireo mpandraharaha madinika avy any ivelany, ao amin'ny firenena.
Amin'ny lahatsary eto ambany, miresaka (amin'ny fiteny Paortigey) misimisy kokoa momba ny tantarany i Talal, ary mangataka ireo mpankafy ny sakafo Syriana mba hanampy azy hahatratra ny tanjony hanokatra toeram-pisakafoana.
Araka ny Kaomity Breziliana ho an'ireo Mpitsoam-ponenana (Conare), mampiantrano mpitsoam-ponenana miisa 7.700 mizaka zom-pirenena 81 samihafa i Brezila ankehitriny, izay avy any Syria ny ankamaroany (23%), arahan'i Kolombia, Angola, ary Repoblika Demokratikan'i Kongo. Nitombo 2.131% ny fangatahana fialokalofana ao Brezila tato anatin'ny 5 taona lasa— nanomboka tamin'ny fangatahana niisa 1.165 monja ireo ny taona 2010, ka lasa 25.996 tamin'iny taona lasa iny. Ilay firenena no nahazo fangatahana fialokalofana betsaka indrindra ao Amerika Latina tamin'ny herintaona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/16/74064/
 Nalefa voalohany tao amin'ny bilaogy Migramundo: http://migramundo.com/2015/08/03/refugiado-sirio-lanca-campanha-para-abrir-restaurante-em-sao-paulo/
 hetsika fangatahana famatsiam-bola: http://www.kickante.com.br/campanhas/restaurante-talal-cozinha-siria-0
 Lakozia Syriana an'i Talal: https://www.facebook.com/pages/Talal-Comida-S%C3%ADria/873342422706395?fref=ts